#sharing Trending Posts - PALnet
ယခင်က ဤအချိန် ( Henry Aung ) မင်္ဂလာပါ။ ဟိုယခင်ကဆိုလျင်တော့ ဤသို့သော အခါသမယမျိုးတွင် ဆုတောင်း ပန်ကြားစာများ မင်္ဂလာရှိသော စာများ ရေးသားမည် ဖြစ်သော်လည်း အဖက်ဖက်မှ ယိုယွင်းနေသော နိုင်ငံတွင် အချို့က မြို့ပြတွင်…
Flowers😍😍😍I love purple and orchid. #flower #sharing #orchid #archo ... Flowers😍😍😍I love purple and orchid. #flower #sharing #orchid #archon #palnet #trafficinsider #neoxian #creativecoin Posted via D.Buzz
“ပို့သမျှမြေဩဇာ ဖြုန်းကြအခါခါ” “ပို့သမျှမြေဩဇာ ဖြုန်းကြအခါခါ” မဂႅလာပါ မြန်မာ-ဟိုဗ်အဖွဲ့သားများခင်ဗျာ။ ယနေ့အတွက် သတင်းထူးများကို မတင်ပြခင် ယမန်နေ့က ဘယ်ရီဖိုင်းဖြစ်သော သတင်းတစ်ချို့ကို အရင်တင်ပြအုန်းအံ့။ မနေ့က နံနက်စောစော သတင
ထောင်ချောက်...! Hive platform ပေါ်ရှိ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး မဂ်လာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ... ဒီနေ့မနက်မိုးလင်းအိပ်ယာကထတော့ ကြွက်ထောင်ထားသော ထောင်ချောက်ထဲတွင် ကြွက်မိနေပါတော့သည်။ ထိုကြွက်ထောင
“မိုတီဗရပွနဲ့မွင်းခါးလိုက်ပွဲ” “မိုတီဗရပွနဲ့မွင်းခါးလိုက်ပွဲ” မဂႅလာပါ မြန်မာ-ဟိုဗ်အဖွဲ့သားများခင်ဗျာ။ တူဒေးသတင်းထူးကတော့ အတော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျ။ အင်းပြောရရင် လွန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် အတွင်းက စစ
အမိမဲ့သားရေနည်းငါး ( Henry Aung ) မင်္ဂလာပါ။ လွန်ခဲ့သော စက်တင်ဘာလလယ်ခန့်တွင် ကျွန်တော့အနေဖြင့် မကြည့်ဖြစ်သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော အင်္ဂလန် ပရီမီးယားလိဒ် ဘောလုံပွဲအား ကြည့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့ အနေဖြင့် ယခင်ကတော့…
“အပြောကျယ်တဲ့ ယောနယ်" “အပြောကျယ်တဲ့ ယောနယ်နှင့် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးအကြောင်း” မဂႅလာပါ မြန်မာ-ဟိုဗ်အဖွဲ့သားများခင်ဗျာ။ အော်ငါ့နှယ် မပြောလိုက်ချင်ဘူး-- ပြောပါဗျ -- အေးပါ ပြောချင်လို့ အစပျိုး
လျှာထုတ်ပြောင်ပြမည့် ဘိုတုနောက်ဆုံးဘဝ သရော်စာ "ဟဲ့ မောင်မင်းကွီးရွှေ မင့်တစ်ယောက်ထဲလား"
“အမွေ-၂” ကျွန်တော်ကွီးရွှေ ယခု “အမွေ” အပိုင်းဆက်များကို ရေးသားနေရင်းမှပင် လွန်လေပီးသော ဖခင်ကြီးအား အမှတ်ရနေမိသည်။ မိဘမေတ္တာတရားသည် နှိုင်းယှဉ်ရန်ပြရန် အရာရှာမတွေ့ပါ။ ကျွန်တော့အတွက်တေ
“ကွီးရွှေနှင့် ရှဲဒိုးသရော်စာ” “ကွီးရွှေနှင့် ရှဲဒိုးသရော်စာ” မဂႅလာပါ မြန်မာ-ဟိုဗ်အဖွဲ့သားများခင်ဗျာ။ ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကျနော်ကွီးရွှေသည်လဲ ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ အချိန်ကုန်နေခဲ့ရတယ်။ စီးပွားရေးမဟုတ်သော ဝမ်းစာရေးအတွက် ဗျောက်သံမျာ